လောင်စာမဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နည်းပညာ မြန်မာနိုင်ငံ တီထွင်အောင် မြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လောင်စာမဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နည်းပညာ မြန်မာနိုင်ငံ တီထွင်အောင် မြင်
လောင်စာမဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နည်းပညာ မြန်မာနိုင်ငံ တီထွင်အောင် မြင်
Posted by Passing By on Jun 1, 2012 in Copy/Paste | 40 comments
မှာပါတဲ့ လောင်စာမဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနည်း ဟာ အမှန်တကယ်ဘဲ လား .. ?
ကျွန်တော် က လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သတ်ရင် အဖိုအမ ဆိုတာဘဲ သိတော့ .. ဟီး ..
ပြီးတော့ အမှန်တကယ်ဆိုရင် ဘယ်မှာ သွားရောက်စုံစမ်းလို့ ရနိုင်မလဲ ?
ပြီးတော့ ဘယ်သူများ ပိုမိုကျိုးကြောင်းဆီလျော် အောင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲ ?
အောက်ကတော့ Link သွားစရာမလိုအောင် CAP လုပ်ပေးထားပါတယ် ..
ကို ကာကွယ်ရန် လောင်စာမဲ့ လျှပ်စစ်နည်း ပညာသစ်ကို တီထွင် အောင်မြင် နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ယင်းနည်းပညာကို တီထွင်ခဲ့သော ဦးစိုင်းသန့်ဇင် က ဇန်န၀ါရီလ ၂၅ရက်နေ့တွင် ပြောသည်။
“ဒီနည်းပညာက ဘယ်သူမှ မတီထွင် နိုင်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်ကျော်ကြာအောင် ငွေကုန်ခံ၊လူပင်ပန်းခံ၊မိသားစုကို စွန့်လွှတ်ပြီးရှာဖွေတီထွင်ခဲ့တာပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူသား
တွေရဲ့ လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်သွားရုံတင်မကဘဲ ပိုတောင်ပိုပါ သေးတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
သူကြီးလည်း သိမယ်မထင်ပါဘူး .. ဒါကြောင့် သူကြီးကိုတော့ အပူမကပ်သေးပါဘူး .. ဒါပေမယ့် သူကြီးလည်း မလွတ်ပါ .. မကြာမီလာမည် မျှော်..
ရွာသူ ရွာသား ဂျွတ်ဂျွတ်ကြီးတွေကို အားကိုးလျက် …………………..
မြန်မာတစ်ယောက် နိုဗယ်ဆုရတော့မယ်သဂျီးရေ့ အဟေးဟေး
ဒီသတင်းကို အရင်တုန်းကလည်း ကြားဖူးသလိုဘဲ
http://www.myanmar.mmtimes.com/2010/upper/454/upper01.html ကို သွားကြည့်တော့
အမှန်အကန်ဘဲ အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီး လုပ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးဘဲ
အမြင်မကြည်တဲ့ သူဂျီးတစ်ယောက်တာ ဂေါက်နေတာ
သဂျီးကို ဂေါက်နေတာတဲ့ ..
သူက ပြောတာ …
ငရဲတော့ ကြီးတော့မှာပဲ …
တော်သေးတယ် ဒို့သဂျီးက ဘယ်လိုပြောပြော ဗွေမယူတတ်ဘူး ..
ဟိုဟာ ကြီးတယ် .. ( သဘောထား ..)
သီအိုရီအရ ဖြစ်နိုင်တယ်… လက်တွေ့မှာတော့ ဝေးပါတယ်။
ထောက်ခံတယ် အားရပါးရဂျီးကိုထောက်ခံတယ် ဖြဲမရေ့ (ဟီး တဂျီးမင်း မျက်ခုံးလှုပ်နေဘီ)
အမလေး ငါတို့သူဂျီး အူးကိုင်က စိတ်ထားကြီးတယ်အေ့
နာ့ ဗိုက်ကလေးရဲ့ ကြယ်လေးကို ပြန်ကစ်သွားတယ်
သူ့ခဗျာ ပျော်နေတဲ့ အပျော်လေးတောင် ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိ
တကယ်သာ ဖြစ်ရင် အခုဆိုသုံးနေပါပြီ။
U tube မှာ ဗီဒီယိုနဲ့ တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
U tube မှာ free electricity energy လို့ ရိုက်ပြီး
ကျွန်တော်လူဟား .. ကျိုင်းတုံသားပါ.. လုံးဝ(လုံးဝ)မယုံတာ…
ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်နိုင်တော့မယ်။ဂုဏ်ယူပါတယ် ဆရာရေ။
အော် ရေစီးကနေလျှပ်စစ်ထုပ်ဖို့ လည်းတွေ့ ထားပီနော် ကြည့်လိုက်ကြပါဦး
အဲ့စက်ကြီးထုတ်ဖို့ ရှယ်ယာခေါ်မယ်ဗျို့ ၊ထည့်ကြဦးမလား
လူများထံမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွတ်သော ရူရုဖြင့် လျှစ်စစ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားရာတွင်အောင်မြင်မှုရရှိနေကြောင်းသိရသည်..။
ရူရူး(Urine)မှာ အပူချိန်(91-99 degrees F) ရှိပြီး ဆားဓါတ်ပါဝင်သဖြင့်.. အမြင့်မှပန်းချသော် စွမ်းအင်နိယာမအရ.. ရရှိသော စွမ်းအင်ဖြင့်. လျှပ်စစ်ထုတ်သည့် ဒိုင်နမိုများကို လည်ပါတ်စေပြီး.. လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရူရူးလျှပ်စစ်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်မည်ဆိုလျှင် မြို့တစ်မြို့တွင် မဂ္ဂါဝပ် ၄၀ လိုသည် ဆိုပါက ပေ၁၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်ရှိသည့် နေရာတွင် ရူရူပေါက်ရန်အပေါက်ကြီးကို.. စင်မြင့်ပေါ်တွင်ထားရှိပြီး မြို့နေမြို့သူားများ.. စင်ပေါ်တက်၍ မနက်တကြိမ်..ညနေတကြိမ်ပေါက်ရန်သာလိုအပ်ပါသည်။
လျှပ်စစ်ပိုလိုမည်ဆိုပါက.. တနေ့ရေ ၂ဂါလံသောက်ကာ… တမြို့လုံလူတန်းစေ့ ထွက်ရောက်အားပေးခြင်းဖြင့်.. ရရှိနိုင်ကြောင်း..။ ရရှိလာသောစွမ်းအင်ဖြင့် ရူရူများကိုသန့်စင်ကာ.. သောက်သုံးရေအဖြင့်ပင်ပြန်လည်အသုံပြုနိုင်ကြောင်း..။
သို့ဖြင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး လို အပ်နေသည့် လျှပ်စစ်ကို ယခုကဲ့သို့ တီထွင် ဆပွားရင်း အသုံးပြုသွားမည် ဟုဆိုသည်။
ယင်းနည်းပညာ၏ အောင်မြင်မှု အခြေအနေကိုမှ ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာဆိတ်ဘိုတို့ အဖွဲ့ကမေလ လ၂၉ရက်နေ့တွင် လာရောက် လေ့လာပြီး နည်းပညာမှန်ကန်သဖြင့် ရူရူနည်းပညာလျှပ်စစ်ထုတ်မည့်သူ .. ဒေါတုတ်ကြီးနှင့် ပူးပေါင်းလိုကြောင်း ကမ်းလှမ်းထားသည်။
“ဒီပညာရှင် လောကမှာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ လျှပ်စစ်မှာလော့စ်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သီအိုရီ သဘော အရဆို သူ့ကို ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့ မရဘူး။ ဒါကလည်း သူတီထွင်ထားတာ အောင်မြင်ခဲ့လို့သာ။ သူအခုချိန်မှာ ဒီလို လုပ်ချင်ပါ တယ်လို့ ပြောရင် သူ့ကို စိတ်မှ ကောင်းသေးလားလို့ လူတွေ အထင်သေးကြမှာ အမှန်ဘဲ။ သူလည်း မအောင်မြင်တုန်းကတော့ ကြုံခဲ့မှာပါ။ အခုတော့ သူဒီနည်းပညာကို အောင်မြင်သွားပြီ” ဟု အမေရိကန်ပညာရှင် တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဘီယာရောင်းကောင်းအောင် ကန်ပိန်း လာလုပ်နေတယ်ထင့် …
အလုပ်ထွက်ပီး အဲ့က လျှပ်စစ်ဌာနမှာ ဘဲ လုပ်တော့မယ်…
တနေ့ … ရာရှင် အနေနဲ့ ဘီယာ ၂ဂါလံလောက် ယူပီး …
ဒီသတင်း ရေးတာ ကြာခဲ့ပါပြီ ။ မှန်ခဲ့ရင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်း ဆန္ဒပြစရာ အကြောင်းတောင်ပေါ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ကပ်ဖဲ့ ပြောရရင် လောင်စာမဲ့လို့လဲ မဆိုနိုင်ပါဘူး ။ ပထမ မီးစက် စလည်ဖို့ ဘာနဲ့ လည်မလဲ၊
မြန်မာတွေ ထွင်လိုက်ရင်တော့ ခပ်ထူးထူးတွေဗျ.သူတို့ ထွင်တာတွေက အနောက်တိုင်း သိပံနဲ့ သိပ် ဆက်စပ်လို့ မရဘူး…ဥပမာဗျာ.. ဓာတ်လုံး ကိုဖိုထိုး ပြီးလေပေါ် ပျံတယ်..ဒါ က chemistry ဆိုပေမဲ့ တမျိူးပဲ.ဘယ်လို ကြီးလဲ မသိဘူးအနောက်တိုင်း sceince နဲ့ အရှေ့ တိုင်း sceince နဲ့ ကွာခြားချက်လားမသိ) ..ခုလည်းကြည့်..လျှပ်စစ်ကို ပွားပြီး ဘာမှမလို ပဲထုတ်မတဲ့..ကြည့်လိုက်ရင်တော့ စိတ်ကူးယာဉ် ဆန်ဆန်ပဲ..သိပံနည်း နဲ့ စဉ်းစားရင်ပေါ့.. ဒါပေမဲ့ တကယ်ဆိုရင်တော့ .. နိုင်ငံကတော့ ကောင်းစားပြီ…ဟိုအရင်ကလည်း ရှိတယ်လေ.စကောမယာဉ်တို့ ဘာတို့ ညာတို့ တို့ .. အဲတော့ကာ..ကြည့်ရတာ..ခုလည်း နိုင်ငံက နည်းနည်း သန့် လာတော့ ရွက်ပုန်းသီးပညာရှင်တွေ ကထွက်လာကုန်ပြီ..အဲတော့ကာ.. အနောက်တိုင်း က ကောင်တွေ ပန်ကန်ပြားပျံ မထွင်နိုင်ခင်..ကျူပ်တို့ တွေက များ ကောက် ထွင်လိုက်မလားမသိ..
စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့။ ဟင်း…တကယ်တာဆိုရင်တော့ တည်ဆောက်ပြီးသား ရေကာတာတွေ လွမ်းပြီ၊ ဘ၀ပျက်ပြီ။ NANO နည်းပညာတောင် ကျယ်ကျယ်ပြန့် မသုံးနိုင်သေးပါဘူး အရပ်ကတို့ရေ…
အဲ့ဒီသတင်းကြီးက ကြာနေပါဘီ အခုမှပြန်တင်ထားတာလားမသိဘူး
လျှပ်စစ်ဓါတ်ထွက် အောင်လုပ်ပြတာ လွယ်လွယ်လေးပါ။
အမ်ပီယာများများ ဗို့ များများ တနည်းပြောရရင် ဝပ်များများရအောင်လုပ်ဖို့ ခက်တာပါ။
လျှပ်စစ်ဓါတ်ကို အာလူး၊ခရမ်းချဉ်သီး၊ပန်သီး၊သံပရာသီး၊လိမ္မော်သီး၊ရှောက်သီး…..စတဲ့အသီးအနှံကထုတ်လို့ ရပါတယ်။
တစ်ခုကို ဥပမာအနေနဲ့ ပြောပါမယ်။
အာလူးတစ်လုံးကိုယူ အနေတော်၊ကြေးပြား၊သွပ်ပြားတစ်ချပ်စီထိုးစိုက်လိုက်တာနဲ့ 
၊ကြေးပြား(+) သွပ်ပြား(- )ဗို့ ထွက်လာပါတယ်။
ဒါကိုဓါတ်ခဲတစ်လုံးအနေနဲ့ မြင်ပါ။ဗို့ များများလိုချင်ရင်တန်းဆက်ဆက်ပါ။
(+) (-) (+) (-) (+) (-) …. ဆက်တာကိုဆိုလိုပါတယ်။
အမ်ပီယာများများ လိုချင်ရင်( + ) တွေစုဆက်၊( – ) တွေစု ပြီး ဆက်၊ရပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားရင် စမ်းကြည့်ပါ။ LED မီးသီးတစ်လုံးထွန်းလို့ ရပါလိမ့်မယ်။
စမ်းသပ်ပြီး အသီးအနှံကို ပြန်မစားရဘူး။
ပင်လယ်ရည်၊အသီးအနှံရည်ကနေ ထုတ်လို့ လည်းရတယ်။
ဒါမှတကယ် လောင်စာမဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နည်းပညာပါ။
ရွာသားတွေ စမ်းသပ်လို့ အောင်မြင်ရင်
“MZ ရဲ့ လောင်စာမဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နည်းပညာ ” post တင်ပေးပါလား။
တတ်/သိ သူတွေကိုစောင့်ပြီး အခုမှ ကွန်မင့်ရေးပါတယ်။
ကျုပ်က ပညာရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ သူများပြောတာကို နားလည်သလောက် ၀င်ပြောကြည့်တာပါ။
ပိုစ့်မှာပါတဲ့ နည်းပညာဟာ လောင်စာမဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။
အဓိက လောင်စာက nichrome wire တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါတွေ လိုသလောက် အများကြီး ရရင် အလုပ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့။
ဒီနည်းပညာရဲ့ သဘောက ပထမ သမားရိုးကျနည်းနဲ့ nichrome wire ကို ပူစေအောင် လျှပ်စစ်ထုတ်ရပါမယ်။
nichrome wire ကို လျှပ်စစ်ဖြတ်စီးတဲ့အခါ မော်လီကျူးတွေပြိုကွဲပြီး အပူဓါတ်ထွက်ပါတယ်။
အဲဒီအပူကို တခုခု ဥပမာ ရေ ကို စီးကူးစေပြီး အဲဒီကတဆင့် စွမ်းအင်ပြန်ထုတ်ရင် မူလ nichrome wire ကိုပေးရတဲ့ လျှပ်စစ်ထက် ပိုထွက်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် နှစ်ဆမက ပိုထွက်ပါတယ်။ အဲဒီလျှပ်စစ်ကို အဲဒီဘွိုင်လာကိုရော အခြားဘွိုင်လာကိုပါ ထပ်ပို့ပေးခြင်းဖြင့် စွမ်းအင် ဆပွားသွားနိုင်တာမျိုးပါ။
အဲဒီမှာ nichrome wire က မော်လီကျူးတွေ တဖြည်းဖြည်း ပြိုကွဲသွားပြီး အပူထွက်တာ နည်းသွားမှာပါ။ အဲဒီတော့
nichrome wire အသစ်တွေနဲ့ ပြန်လဲလှုယ် ပေးရမှာပါ။
မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောလိုပေမယ့် လက်တွေ့လုပ်ဘို့ ဖြည့်ဆည်းစရာတွေလဲ အများကြီးလိုပါတယ်။
ကိုက် / မကိုက် လဲ တွက်ကြည့်ရဦးမှာပါ။
ဦးဦးပါလေရာ ကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်ရှင့်
အပေါ်က စာထဲက အကြောင်းအရာက လုံးဝကို မရှင်းခဲ့ဘူး ။ ဦးဦးပါလေရာ ရှင်းပြမှဘဲ နားလည်သွားရပါတယ်ရှင့်
ကြာခဲ့ပါပြီ ထိုသတင်းက ။ 2011 နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်ကဖြစ်မယ်ထင်ပါသည် ။ မြန်မာ တိုင်း သတင်းစာကြီးမှာကို အတိအလင်းပါခဲ့ပါသည် ။ သို့သော် မကြာသောကာလအတွင်း ထိုသတင်းလဲ ပျောက်ကွယ်သွားသလို ထိုလူကြီးအကြောင်းလဲ မကြားရတော့ပါ။ အဘယ်သို့ဖြစ်သည်မသိ သို့သော် ယခုလို လျှပ်စစ်မီးရရှိဖို့ လူတွေလမ်းပေါ်ထွက်ဖယောင်းတိုင် ကိုင်နေချိန်မှာ ထိုလူကြီးပြန်ပေါ်လာသင့်ပါသည်။ သို့သော် မျှော်သာမျှော် ပေါ်မလာဆိုသလို ဘယ်ဆီကိုများပုန်းရှောင်နေသည်မသိ။ ထိုလူကြီးကပြောပါသေးသည် နိူဘယ်ဆုထိလျှောက်ထားမည်တဲ့ ။။ နိူဘယ်ဆုရမရတော့မသိ .. တကယ့်ပါရမီရှင် ပညာရှင်ကြီးဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိ.. မြန်မာပြည်မှာ ထိုသို့သော ပညာရှင်ကြီးရှိမရှိတော့ မသိ….သိတာကတော့မြန်မာပြည်တွင် ဖယောင်းတိုင်တို့ရောင်းလို့ကောင်းဆဲ ကောင်းမြဲပင်……
ရွဲ့ရေးမှန်းမသိ.. ဖဲ့ရေးမှန်းမသိနဲ့.. စွတ်တင်ရင်း.. လေထဲကနိုဗယ်ရတဲ့သူတယောက်အကြောင်း.. ပြန်မွှေလိုက်တာ..
Posted by kai on Feb 19, 2010 နော.. လွန်ခဲ့တဲ့..၂နှစ်ကျော်က….
“ရူရူးဖြင့် လျှပ်စစ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားမှုအောင်မြင်”.. ဆိုတာလေး..
http://myanmargazette.net/1685/business-economy ဒီမှာ ရေးထားတာတွေ က ပိုပြီးပြည့်စုံ သလိုလိုဘဲ ..
ပြီးတော့ ..Perpetual machine ဆိုတဲ့ စာလုံးဆန်းဆန်းပြားပြားလေး .. တွေ့ရပါတယ် ..
Online မှာ ရှာကြည့်တော .. .. .
Perpetual နည်းပညာနဲ့ လျှပ်စစ်ထုတ်တာကလည်း ရှိပါတယ်။
အဓိက က အား အလွန့်အလွန် ကောင်းတဲ့ သံလိုက်ကို သုံးထားတဲ့စနစ်ပါ။
သံလိုက်ရဲ့ တောင်၊ မြောက် အစွန်းတွေ မတူရင်စွဲကပ်ပြီး၊ တူရင်တွန်းကန်တဲ့ သီအိုရီကိုသုံးထားတာပါ။
သံလိုက်တုံးတွေကို အဝိုင်းပြားတခုမှာ အဝိုင်းရဲ့ အနားတလျောက် သံလိုက်တွေ တတုံးစီ စီရမယ်။
စီထားပြီး သံလိုက်အဝိုင်းပြားနားကို အားကောင်းတဲ့ နောက်သံလိုက်တစ်ခုကို ကပ်လိုက်တဲ့အခါ
အစွန်းတူရင် တွန်းကန်တဲ့ သီအိုရီအရ သံလိုက်အဝိုင်းပြား စရွေ့ ပါတယ်။
အရှိန်မသေခင် နောက်အစွန်းတူ သံလိုက်တစ်တုံးနဲ့ ထပ်တွေ့ ပြီး
ဒီနည်းနဲ့တောက်လျောက်လည်ပတ်မှု စွမ်းအင်ရစေပါတယ်။
ဒီ တောက်လျောက်လည်ပတ်မှု စွမ်းအင်ကို GENERATOR နဲ့ တွဲ လိုက်ရင်
သီအိုရီ အရ ဟုတ်နေတာပါပဲ။တကယ့်လက်တွေ့ မှာ မရပါဘူး။
ပိုရှင်းအောင် u tube video မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တောက်လျှောက်လိုက်ပြီးလေ့လာရင် ပစ္စည်းရောင်းစားချင်တာပဲတွေ့ မှာပါ။
Perpetual နည်းပညာ ဟာ ရုံးစားပွဲခုံမှာ အလှတင်တားတဲ့ တစ်ချက်လှည့်လိုက်ရင်
အဆက်မပြတ်လည်နေတဲ့ဘီးလုံးရယ်၊ ဘောသီးတွေ မှာတွေ့ ဘူးမှာပါ။
How pity Sai Thant Zin! – ridiculous!
Hey kai – Do not make us fool!
.. ပြင်ပအား တစ်ခု မသက်ရောက်မ မချင်း .. လည်ပတ်နေနိုင်တယ် .. Theory အရ ..
ခက်တာက . ကမ္ဘာပေါ်မှာ fraction တွေ များနေတာပါ ..
ဒါကြောင့် .. သာမန်အားဖြင့် တော့ ခုချိန်ထိပေါ့လေ .. လုံဝ ဖြစ်နိုင်တာ မတွေ့ရသေးပါဘူး ..
ဒါပေမယ့် .. လျှပ်စစ် အနေနဲ့ .. electron လေးတွေ အနေနဲ့ စဉ်းစားကြည့်မယ် ဆိုရင် ..
သူတို့များရဲ့ fraction က zero နီးပါးဖြစ်နေနိုင်တယ် . ဒါဆို လျှပ်စစ် နဲ့ ဆိုရင် … ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လို့ အဖြေရပါပြီ ..
လျှပ်စစ်နဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ..
ဟုတ်ပါပြီ .. လျှပ်စစ်နဲ့ အဲ့လို constant field လေး တစ်ခု ရရှိလာပြီဆိုပါတော့ .. ဘယ်လို အသုံးချမလဲ .. ဒီနေရာမှာလဲ .. စွမ်းအင် theory အရ .. စွမ်းအင် ဆိုတာ ဖျက်စီးလို့ လည်း မရ ဖန်တီးလို့ လည်း မရ ပါဘူး .. တကယ်လို့ constant field လေး အတွင်းမှာရှိတဲ့ စွမ်းအင်ကို ယူသုံးလိုက်တယ်ဆိုရင် .. အဲ့ field လေး က ပျက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မယ် .. ဒီတော့ ……………….???
.. မရှိခြင်းက နေရှိုခြင်းကို လုပ်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သေးသော အရာဖြစ်နေပါသေးတယ် .. no theory, no pratical and no enough resources.
P.S E=mc sq ဆိုတာလည်း စွမ်းအင်တည်မြဲခြင်း နိယာမ ထဲ အကျုံးဝင်နေပါသေးတယ် .. !
လူတွေဖြစ်ပြီး..သရဲတွေ..နတ်တွေကို ဘာလို့မခိုင်းစားနိုင်သလည်း တွေးနေမိတယ်..
တစ္ဆေ သရဲ သဘက် ဘီလူး မှင်စာ ရက္ခိုသ် မြေဖုတ် ကျွတ်။ သင်းကွဲပြိတ္တာ၊ နတ်ဘီလူး၊ နတ်မိစ္ဆာများတို့ရေ.. လိုချင်တာပြော..။ you name it!
..မပြောရင်.. မဟန..အဲအဲ.. တန်ခိုးကြီးတဲ့ဆိုတဲ့.. လူကြီးတွေကိုတိုင်လိုက်မှာနော..
ဒီမှာ.. တန်ခိုးတာကြီးတာ.. တခြားစိတ်ကူးထဲကဟာတော့ ..အကုန်လုပ်လို့ရတယ်..
လျှပ်စစ်မီးကိုမလုပ်တတ်လို့.. မီးပျက်လို့.. ညစ်နေတာတဲ့..။
လောင်စာမဲ့ လျှပ်စစ် ဆိုပြီး တွေ့လို့ ၀င်ဖတ်လိုက်တာ မှားပါတယ်။
မနေ့ကတော့ FM မှာ ဆောင်းပါးတခု ဖတ်ပြတာ နားထောင်လိုက်တယ်။ ကျောက်မီးသွေးကနေတဆင့် လျှပ်စစ်ထုတ်တာ ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လောက် ရာနှုန်း စသဖြင့် သေချာ စီစစ်ပြီး ဖတ်ပြသွားတယ်။ ကျောက်မီးသွေးနဲ့ လျှပ်စစ် ထုတ်ဖို့ စဉ်းစားနေကြတဲ့ ပုံပါပဲ။
ဦးသိန်းစိန် ကိုရီးယား သမ္မတ နဲ့ တွေ့တုန်းက ကျောက်မီးသွေး အကြောင်း ဆွေးနွေးလို့ ကျောက်မီးသွေး နဲ့ လျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ သတင်းတွေ ကြားထားတာ.. အခု ဆောင်းပါတွေ ဘာတွေ ဖတ်ပြနေတာ ကြားလိုက်ရတယ်။
ကျောက်မီးသွေး က ထွက်တဲ့ အဆိပ်ဖြစ်တဲ့ ပြာတွေကို ပြန်လည်သန့်စင်ပြီးတော့ ဘိလပ်မြေ အုတ် လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အချိုးကျ စပ်ပြီးတော့ လုပ်မယ်ဆိုရင် သဘာဝ ကို မပျက်စီးပဲ လျှပ်စစ်မီး ထုတ်လုပ်ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းသင့်ကြောင်း ဖတ်ပြသွားတယ်။
စကားမစပ် လေအားလျှပ်စစ်တွေ ဘာလို့ မစဉ်းစားကြတာလဲ မသိဘူးနော်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လေတိုက်အား ကောင်းတဲ့ နေရာ သိပ်မရှိလို့များလား မသိဘူးနော်။
လေအားလျှပ်စစ်က ရတဲ့လျှပ်စစ်နဲ့စာရင် ပစ္စည်းကရိယာတည်ဆောက်ရတာ ဈေးကြီးလွန်းတယ်ထင်တာပဲ။
အရင်းအနှီးကြီးကြီးနဲ့ လုပ်ဖို့လိုမယ်။ ထိုင်းကုမ္ပဏီတခု တနင်္သာရီတိုင်းမှာ လာလုပ်မယ်လို့ကြားပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း- ထွက်တဲ့လျှပ်စစ်ကို သူ့နိုင်ငံပြန်ပို့မှာတဲ့…။
တကယ်ဖြစ်နိုင်တာတခုက နေအား (ဆိုလာ) လျှပ်စစ်ပါပဲ။
ဆိုလာက ဈေးကြီးတယ်လို့ ပြောရင်ပြောမယ်။
သိပ်စွမ်းဆောင်ရည်မကောင်းတဲ့ ဆိုလာပြားတွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်။
အခုတရုတ်ထုတ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံထဲ အများကြီးဝင်နေတာကြည့်လေ..။
ဆိုလာဆဲလ်ရဲ့ အဓိက ကုန်ကြမ်းဖြစ်တဲ့ ဆီလီကွန်ပါတဲ့ သဲ က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုံအလောက်ထွက်မယ်ထင်တယ်။
နေအားလျှပ်စစ်မှာ အဓိကပြဿနာက/အဓိကကုန်ကျစားရိတ်က နေ့ခင်းရတဲ့လျှပ်စစ်ကို ညဖက်သုံးလို့ရအောင် စုဆောင်းဘို့ပဲ..။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လောလောဆယ် အဲဒါမလိုသေးဘူး…။
ညဖက် လျှပ်စစ်မရတဲ့အချိန် ဒီဇယ်နဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ကို နယ်မြို့လေးတွေမှာ အိုကေနေပြီ..။
အခုလက်ငင်းအခြေအနေထက် အများကြီး သာသွားမှာ။
ဆူး ဖေဖေ ရဲ့ နိုင်ငံခြားက မိတ်ဆွေ တယောက်က အရင်က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ လုပ်ငန်း တူတူ လုပ်ကြတယ်။ နောက်ပိုင်း သူက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မလုပ်တော့ပဲ သူ့ဟာသူ လုပ်တယ်။ သူနဲ့ အဆက်အသွယ်ရတော့ သူက လေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်း လုပ်ရင်းနဲ့ အောင်မြင်သွားတော့ ထိုင်စားယုံပဲ ဆိုလား.. အဲလို အဆင်ပြေတယ်ကြားတာပဲ.. ခေါင်းမရှုပ်ရပဲ မဟာဓါတ်အားလိုင်းထဲ ထည့်ရောင်းနေတာ လို့ပြောတယ်။
သူကြီးရဲ့ ရှူး ရှူး စီမံကိန်းစရင်တော့ ရွှေကြည်ပြေးပြီဗျို့။ အဲဒီမြို့မှာနေတော့ဘူးရယ်။ နံမှာစိုးလို့။
လောင်စာမဲ့ နည်းပညာကိုတော့ မယုံကြည်ပါ။ ကြက်ဆူဆီ တုန်းကလည်း တစ်ခါဖြစ်ပြီးပါပြီ။
နည်းပညာအသစ်တစ်ခုဆိုတာ ထောင့်စုံ ဘက်စုံကနေ သီအိုရီရော လက်တွေ့ရော စဉ်းစားရမယ်။ လက်တွေ့အသုံးချလို့ရမရဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်တမ်းလက်တွေ့လုပ်ကြပြီဆိုမှ လိုအပ်ချက်တွေ၊ အားနည်းချက်တွေက တွေ့ရမှာပါ။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး “ လေအားလျှပ်စစ် ” ကို
တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးလာတာ ဆယ်စုနှစ်များစွာရှိနေပါပြီ။
မြန်မာပြည်သူတွေ အားလုံးလည်း “ လေအားလျှပ်စစ် ” ရဲ့ အကျိုးရလဒ်ကို
ပြည့်ပြည့် ဝဝ ခံစားလာခဲ့တာ ယနေ့ ထိမကုန်နိုင်သေးပါ။
ဟိုတလောကဘဲ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးက “ လေအားလျှပ်စစ် ” ထပ်ပြီးထုတ်လိုက်တာ
မဟာဓါတ်အားလိုင်းတိုင်တွေ၊ကြိုးတွေတောင်မနိုင်လို့ပြုတ်ပြတ် ၊ကျိုးကျ ၊ပြိုလဲ ကုန်တယ်လေ။
ကမ္ဘာမှာ “ လေအားလျှပ်စစ် ” အများဆုံးထုတ် သုံးတဲ့ နိုင်ငံဟာ တို့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံဘဲရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသိဆုံး၊ အတတ်ဆုံး၊ “ လေအားလျှပ်စစ် ” ထုတ်တဲ့ မဟာပညာရှင်
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးကို ဘယ်လို ဘွဲ့ တံဆိပ် ချီးမြှင့်သင့်ပါသလဲ။
ယုန်ပေါင်။ သတင်းကို တော်တော်ကြာကြာတုန်းကတစ်ခါဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
“၁၉၉၉ခုနှစ်ကတော့ လျှပ်စစ် မီးထွက်တယ်။” ဆိုတော့ကာ … ခုအချိန်ဆို တော်တော်ကို အသုံးများနေ ရလောက်မှာပေါ့။